विश्वका यी देश जहाँ रात पर्दैन
Wednesday, 15 Jun, 2016 2:27 PM
दिनको आशा रात पछि नै गर्न सकिन्छ । जव सुर्य झुल्किन्छ तब दिनको शूरुवात भएको मानिन्छ । तर विश्वका यस्ता ठाउँ छन् जहाँ सुर्य डुव्दैन अर्थात रात पर्दैन । २४ घण्टा नै उज्यालो हुन्छ । विश्वका यी पाँच देश जहाँ रात पर्दैन् ।
१ नर्वे : यो पहाडै पहाडले घेरिएको देश हो । नर्वेमा मे देखि जुलाइसम्म लगभग ७६ दिन सुर्य डुब्दैन् । यसलाई ल्याण्ड अफ दि मिड नाइट पनि भनिन्छ ।
२. स्विडेन : यहाँ आधा रातमा पनि सुर्यको उज्यालो देख्न सकिन्छ । यहाँ मे को शुरु देखि अगस्टको अन्त्यसम्म आधा रातमा सुर्य डुब्छ ।
३. आइल्याण्ड : यसमा पनि १० मे देखि जुलाईको अन्तसम्म सुर्य अस्ताउदैन । यहाँ झरना , ज्वालामुखी ,ग्लासियर, प्राकृतिक शुन्दरताको आनन्द लिन सकिन्छ ।
४.क्यानडा : यहाँ गर्मीको मौसममा ५० दिन सम्म सुर्य अस्ताउँदैन् । यहा पनि रातको अध्यारो देख्न पाइदैन् ।
५.फिनल्याण्ड : यो पनि यस्तो ठाउँ हो जहाँ गर्मीमा ७३÷७४ दिनसम्म सुर्य डुब्दैन् । यहाँ साइक्लिङ ,स्किङ जस्ता गतिविधी गर्न सकिन्छ ।